နိမိတ်ကြီးလေးပါး - ဝီကီပီးဒီးယား
နိမိတ်ကြီးလေးပါး ဆိုသည်မှာ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားဘဝက လောက၏ မတည်မြဲမှု၊ ဒုက္ခများကို သိမြင်နားလည်ခဲ့သည့် အရာ လေးခု ဖြစ်သည်။ သမိုင်းများအရ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား၏ ဖခင်သည် သားဖြစ်သူအား အနာဂတ်နိမိတ်များအရ ဘဝ၏ ဒုက္ခများကို သိမြင်နားလည်သွားပါက ဘုရားဖြစ်မည်စိုးသည့်အတွက် နိမိတ်ကြီးလေးပါကို မမြင်မတွေ့ရအောင် နန်းတော်တွင် ထားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သူသည် ပထမဆုံးနန်းတော်ပြင်ပသို့ လည်ပတ်သည့်အခါတွင် လူသားအားလုံး၏ ဆင်းရဲဒုက္ခများကို မြင်တွေ့ခဲ့ရကာ သတိသံဝေဂရ၍ ရသေ့ရဟန်းပြုပြီး ထိုဒုက္ခဆင်းရဲများမှ လွတ်မြောက်အောင် တောထွက်ကာ ရဟန်းပြုခဲ့သည်။
သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား နိမိတ်ကြီးလေးပါးအား မြင်တွေ့ရပုံ
၁.၂ နိမိတ်ကြီးများအား မြင်တွေ့ခြင်း
၂ ကွဲပြားသည့် ဖော်ပြချက်များ
သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးသည် သားဖြစ်သူအား မွေးဖွားပြီးနောက်တွင် ပုဏ္ဏားရှစ်ဦးအား သားငယ်၏ အနာဂတ်ကို နိမိတ်ဖတ်ဟောကြားစေခဲ့သည်။ ပုဏ္ဏားခုနစ်ဦးသည် မင်းသားသည် ဘုရား သို့မဟုတ် ကြီးမြတ်သည့်ဘုရင်တစ်ပါး ဖြစ်မည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ကျန်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကောဏ္ဍညသည် ယုံကြည်မှုရှိရှိဖြင့် ကမ္ဘာလောကတွင် ဘုရားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ထိုအခါ မင်းကြီးသည် သားဖြစ်သူအား ကြီးမြတ်သည့်မင်းတစ်ပါး ဖြစ်စေရန် ဆန္ဒရှိခဲ့ပြီးနောက်တွင် မင်းသားအား နန်းတော်အတွင်းတွင် လောကရှိ သာယာဖွယ်၊ နှစ်သက်ဖွယ်များဖြင့် ထားရှိခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ မင်းသားအား ထားရှိခြင်းဖြင့် မင်းသားသည် ထိုသာယာနှစ်သက်ဖွယ်ရာများကို ခံစားနေခြင်းဖြင့် မင်းသားအား လောက၏ အမှန်တရားကို ဖုံကွယ်ထားစေရန် ဖြစ်ပြီး တောထွက်ကာရဟန်းပြုမှုကို ကာကွယ်တားမြစ်ရန် ဖြစ်သည်။
မင်းသားသည် လူငယ်ဘဝကို နန်းတော်တွင်း၌ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ ပျော်မွေ့စရာများဖြင့် ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရောက်သည့်အခါတွင် နန်းတော်ပြင်ပသို့ ထွက်ကာ ပထမဆုံးအကြိမ် လည်ပတ်ခဲ့သည်။ နန်းတော်မှသည် မြို့ဆီသို့ သူသည် ဆန္ဒ မောင်းနှင်သည့် မြင်းရထားကို စီးကာ လည်ပတ်ခဲ့သည်။
ဤသို့ လည်ပတ်ရာတွင်ပင် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားသည် ပထမဦးဆုံးမြင်ကွင်းအဖြစ် သူအိုတစ်ဦးကို မြင်ခဲ့သည်။ မင်းသားအား အိုခြင်းသဘောတရားအား နိမိတ်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မြင်သည့်အခါ မင်းသားသည် ဆန္ဒအား ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းကို မေးမြန်းရာ ဆန္ဒက သတ္တဝါမှန်သမျှ အိုခြင်းတရားကို ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် မင်းသားသည် နာမကျန်းဖြစ်နေသည့် သူတစ်ဦးကို မြင်ခဲ့သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်လည်း မင်းသားသည် အံ့အားသင့်ကာ ဆန္ဒအား မေးခဲ့ပြန်သည်။ ထိုအခါ ဆန္ဒကာ သတ္တဝါမှန်သမျှ ရောဂါဝေဒနာ ခံစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။ ဤတွင် မင်းသားသည် သတိသံဝေဂ ရခဲ့ပြန်သည်။
ထို့နောက်တွင် မင်းသားသည် တတိယအကြိမ်အဖြစ် သူသေအလောင်းတစ်ခုကို မြင်ပြန်ရာ ဆန္ဒသည် သေခြင်းတရားသည် မဖိတ်မခေါ်ဘဲ လူတိုင်းတွင် ကြုံတွေ့လာရမည့်အရာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုနိမိတ်ကြီးသုံးပါးကို မြင်တွေ့ရပြီးနောက် ဘဝတွင် ကြုံတွေ့လာရမည့် ဒုက္ခများကို ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သော မနှစ်မြို့စရာကောင်းသော နိမိတ်သုံးခုကို မြင်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် မင်းသားသည် လေးခုမြောက် နိမိတ်အဖြစ် လူသားတို့၏ ဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း အမှန်တရားကို ရှာဖွေလေ့ကျင့်နေသည့် ရဟန်းတစ်ပါးကို မြင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ မင်းသား၏ စိတ်ထဲတွင် ဘဝများစွာမွေးဖွားဖြစ်ပေါ်မှုမှ ဆင်းရဲဒုက္ခတို့သည် ဖြစ်ပေါ်နေကြသည်ဟု သတိသံဝေဂရကာ ထိုရဟန်းကဲ့သို့ပင် တရားကျင့်ကြံရန် သန္ဓိဋ္ဌာန်ချခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ နိမိတ်ကြီးလေးပါးကို မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးနောက်တွင် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားသည် နန်းတော်ဆီသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ နန်းတော်ထဲတွင် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မည့် ကချေသည်အမျိုးသမီးများသည် မင်းသားအား ဖျော်ဖြကြသည်။ ထိုဖျော်ဖြေမှုအစအဆုံးတိုင်အောင် မင်းသားသည် သူကြုံတွေ့လာခဲ့သည့် သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်းဟူသည့် နိမိတ်လေးပါးကိုသာ စဉ်းစားတွေးတောနေခဲ့သည်။ မနက်ခင်းအစောပိုင်းရောက်သည့်အခါတွင် မင်းသားသည် ကချေသည်အမျိုးသမီးများသည် ဖရိုဖရဲ အိပ်မောကျနေသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ထိုမြင်ကွင်းကို မြင်ခဲ့သည့်အခါတွင် မင်းသားသည် ဆင်းရဲဒုက္ခတို့၏ ကုန်ဆုံးရန်ကို ရှာဖွေရန်အတွက် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်။
နိမိတ်ကြီးလေးပါးကို မြင်တွေ့ပြီးနောက် ဤကဲ့သို့ ကချေသည်များ အိပ်ပျော်နေသည်ကို မြင်တွေ့ကာ မင်းသားသည် ဘဝ၏ ပကတိအမှန်တရားကို နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားသည် ကဏ္ဍကမြင်းကို စီးနင်းကာ ဆန္ဒလိုက်ပါ၍ နန်းတော်မှ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ဆန္ဒကို သူ၏ပစ္စည်းများ ပေးကာ နန်းတော်သို့ ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီး သူ၏ ရဟန်းဘဝကို စတင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မင်းသားသည် ဂေါတမဗုဒ္ဓဟူသည့် အမည်ဖြင့် လောက၌ ဘုရားစင်စစ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
အချို့မှတ်တမ်းများတွင် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားသည် သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်း ဟူသည့် နိမိတ်ကြီးလေးခုစလုံးကို ခရီးတစ်ခုတည်း၌ တစ်ရက်တည်းတွင် မြင်တွေ့ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အခြားမှတ်တမ်းများတွင်မူ ခရီးလေးခုထွက်ရာမှ နိမိတ်ကြီးလေးခုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုကြသည်။ အချို့သောသမိုင်းကြောင်းများတွင် မင်းသား၏ ဖခင်သည် သားဖြစ်သူအား ဆင်းရဲဒုက္ခများကို မသိမမြင်စေရန်အလို့ငှာ မင်းသားအား သာယာဖွယ်ဖြစ်နေအောင် ထားရှိကာ စောင့်ကြပ်ကာ ထားရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။
↑ Keown, Damien (2003). A Dictionary of Buddhism. Oxford University Press, 15. ISBN 0-19-860560-9။
↑ ၂.၀ ၂.၁ A Young People's Life of the Buddha by Bhikkhu Silacara။ AccessToInsight။ 2014-07-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ McFaul, Thomas R. (2006). The future of peace and justice in the global village. Greenwood Publishing Group, 30, 31. ISBN 0-275-99313-2။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ Trainor, Kevin (2004). Buddhism. Oxford University Press. ISBN 0-19-517398-8။
↑ Mehrotra, Chandra (2008). Aging and Diversity. CRC Press, 344. ISBN 0-415-95214-X။
↑ Siddhartha Gautama။ Washington State University။ April 3, 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-04-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cooler၊ Richard။ Buddhism။ Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University။ 2009-04-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Easwaran, Eknath (2007). The Dhammapada. Nilgiri Press. ISBN 1-58638-020-6။ (see article on book)
↑ Gach, Gary (2001). The complete idiot's guide to understanding Buddhism. Alpha Books, 8. ISBN 0-02-864170-1။ “Siddharta+dancing girls.”
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိမိတ်ကြီးလေးပါး&oldid=542588" မှ ရယူရန်
၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။